PeerTube 2.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana mba hanafarana raki-peo, fampakaram-peo, fampifandraisan'ny mpampiasa ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Ny kinova vaovao an'ny ny sehatra itsinjaram-pahefana ho an'ny fampiantranoana horonantsary sy ny fandefasana horonantsary "PeerTube 2.2", izay misongadina ny fanovana isan-karazany ary iza amin'ireny ny ankamaroan'izy ireo mifantoka amin'ny fanatsarana ny interface mpampiasa sehatra, ary koa ny mampakatra horonan-tsary ho azy.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny lampihazo dia tokony ho fantatr'izy ireo fa atolotra toy ny safidy hafa tsy miankina amin'ny mpamatsy toa an'i YouTube, Dailymotion ary Vimeo, mampiasa tamba-jotra fizarana atiny P2P sy mampifandray ireo mpitsidika mpitsidika. Ny fivoaran'ny tetikasa dia zaraina eo ambanin'ny lisansa AGPLv3.
Ny PeerTube dia mifototra amin'ny fampiasana WebTorrent BitTorrent-Client, izay mandeha anaty tranokala ary mampiasa ny haitao WebRTC hananganana fantsom-pifandraisana P2P mivantana eo anelanelan'ny tranokala sy ny protokol aktivitasPub, ahafahan'ny mpizara tsy mitovy mampifandray amin'ny horonan-tsary amin'ny tambajotra federated izay mandray anjara amin'ny mpitsidika. fandefasana atiny ary manana fahaizana misoratra amin'ny fantsona ary mahazo fampandrenesana momba ny horonan-tsary vaovao. Ny interface web nomen'ny tetikasa dia namboarina tamin'ny alàlan'ny rafitra angular.
Inona no vaovao ao amin'ny PeerTube 2.2?
Ity kinova vaovao amin'ny sehatra ity dia miavaka amin'ny fananana ny fahaizana manafatra rakitra audio, inona ianao mamela ny mpampiasa hizara ny fandaminany na podcast amin'ny alàlan'ny PeerTube nefa tsy mamorona chunk videoNa izany aza, raha maniry izy ireo dia afaka mametaka sary amin'ilay rakitra fisie.
Fiovana miavaka iray hafa avy amin'ny PeerTube 2.2 dia ny tontonana fikarohana nohatsaraina, izay nanasongadina torohevitra momba ny fitaovana ho an'ny baiko ho an'ny fikarohana fantsona sy horonan-tsary samihafa. Ohatra, raha hitady fantsona mifandraika amina sehatra iray dia aroso ny fananganana "@ channel_id @ domain".
Ny bokotra Settings dia nampiana tao amin'ny menio eo amin'ny ilany ankavia ny efijery ho an'ireo mpampiasa ivelan'ny Internet, ahafahanao manamboatra ny PeerTube hifanaraka amin'ny safidinao, ohatra, farito raha hampiasa maody P2P ianao ary aseho ny sary kely momba ny atiny ho an'ny olon-dehibe, ampifanaraho amin'ny fiteny, ampandehano ny autoplay ary misafidy lohahevitra famolavolana.
Raha mampakatra horonantsary ao amin'ny PeerTube dia azonao ampiasaina izao ny interface drag sy drop hamindra ny fisie amin'ny totozy fa tsy hiantso ny menio "Select File".
ny interface tsara vaovao hitantanana horonan-tsary misy dika mitovy ho an'ny mpandrindra, izay ahafahana mijery ny lisitry ny horonan-tsary avy amin'ny teboka ankehitriny izay miverina amin'ny teboka hafa, ary koa ny lisitry ny lahatsarin'olon-kafa naverina amin'ny node ankehitriny. Torohevitra an-tsary dia aroso mba hanombanana ny habaka kapila apetraky ny olona hafa.
Ankoatra izany, koa Nasongadina ny fampivoarana ny antonony sy ny fikirakirana fitantanana fitarainana momba ireo horonan-tsary tsy mety. Nasiana sivana isan-karazany ny karazana fitarainana, bokotra hanakanana haingana ny horonan-tsary sy kaonty, naseho tamin'ny sary ireo sary kely, ary nanampy ny fidirana haingana amin'ireo horonan-tsary tafiditra.
Niantsoana antso API mba hamoronana plugins antonony izay manao hetsika toa ny famafana horonantsary, fanamafisana ny fanafarana avy amin'ny URL na riaka, manafina tranokala na kaonty, ary mitazona lisitra mainty video.
Ny interface admin dia manana fanohanana hamenoana ho azy ny lisitry ny tranonkala araha-maso mifototra amin'ny lisitra mitovy amin'izany any an-kafa. Anisan'izany ny lisitry ny node ho an'ny daholobe amin'ny fanafarana rohy, azonao atao ny mampakatra amin'ny alàlan'ny serivisy toa ny github, gitlab, ary ny pastebin.
Ny fampandrenesana mailaka dia manome ny fahaizana mampiasa marika HTML.
Nanampy ny fahaizana mamorona plugins miaraka amin'ny fampiharana ny fomba fanamarinana ivelany.
Plugins telo no aroso ho fanamarinana amin'ny LDAP, OpenID ary SAMLv2.
Fifanarahana amina tonian-dahatsoratra nohatsaraina miaraka amin'ny famaritana horonan-tsary izay manohana ny mari-pahaizana amin'ny fihenam-bidy. Niampy fomba fanovana efijery feno.
Ny fampahalalana fanampiny momba ny fisie dia aseho eo amin'ny fikandrana fampidinana video.
API nohatsaraina mba hifehezana ny fandefasana ny horonan-tsary miorina amin'ny tranokala.
Farany, raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny lisitr'ireo fanovana feno ary koa ireo rohy fampidinana Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » PeerTube 2.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana mba hanafarana raki-peo, fampakaram-peo, fampifandraisana ny mpampiasa ary maro hafa
Ny kinova Firefox ho an'ny Fedora dia efa misy fanohanana hanafainganana ny famoahana video amin'ny alàlan'ny VA-API